Ejypta: Bilaogera hafa nosamborina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Aogositra 2018 3:13 GMT
Nosamborina tamin'ny 11 Jiona i El-Sharkawy raha nitantara momba ny fifidianana Vaomiera Shura na Antenimieram-pirenena ao Ejypta ho fananganana azy ao Talkha ao Avaratr'i Ejypta. Nitatitra i Manfe fa nahamenatra ny dingana fisamborana. Nahavita niantso an-tariby ny namany tao amin'ny tobin'ny polisy mihitsy i El-Sharkawy mba hitantara ny fisamborana azy.
Nanoratra ilay bilaogera Alaa Abdel Fattah fa nalain'ny Fiarovam-panjakana an-keriny i El-Sharkawy ary tsy nisy ny antony ara-dalàna hiampangana azy. Nilaza ihany koa izy fa mpisolovava marobe no niezaka nankao ao amin'ny tobin'ny polisy tao an-tanànany izay noheverina fa nihazonana azy saingy nofitahan'ny polisy izy ireo. Nahomby ihany ny sasany nony farany, na dia nolavin'ny polisy fa any am-ponja izy ary izany no mahatonga an'i Alaa mihevitra fa nalaina an-keriny izy.
Nitatitra i Tahyyes fa misy ny fahasarotana amin'ny fahitana vaovao momba ny famantarana azy, ka lasa sarotra be ho an'ireo bilaogera, namana sy ny mpisolovava ny mitatitra ny fanjavonany any amin'ny manampahefana taorian'ny fihazonana azy. Araka ny filazan'i Tahyyes, tsy manana na iza na iza ankoatra ny namany i El-Sharkawy satria efa maty ela be ny ray aman-reniny. Afaka ny ho naman'i Omar ianao ary manoratra ny anaranao ato ho firaisankina aminy.
Monem-press (Anglisy), Atralnada, egyptwatchman, egymasr, sy Ana Ikwan kosa nampiseho fanohanana sy naneho fahagagana tamin'ny fomba nitondrana an'i Omar tamin'izy niezaka nitatitra ny fifidianana tao an-tanànany ao amin'ny iray amin'ireo governoràn'i Ejypta!
Tamin'ny 2 Jiona, navotsotra ilay bilaogera Mahmoud Abdel Monem rehefa nogadraina nandritra ny 45 andro mahery.
Tamin'ny 22 Febroary, nosaziana efa-taona an-tranomaizina ilay bilaogera Ejypsiana Abdel kareem Nabil Soliman Amer noho ny lahatsorany. Nandany telo taona tany am-ponja izy noho ny lahatsorany momba ny Andrim-panjakana Sonita Al-Azhar ary herintaona an-tranomaizina noho ny lahatsorany momba ny filohan'i Ejypta.